Guddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa oo Xilkii iskaga casilay cabashadii ardaydiisa | FooreNews
Home wararka Guddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa oo Xilkii iskaga casilay cabashadii ardaydiisa
Guddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa oo Xilkii iskaga casilay cabashadii ardaydiisa
fooreApr 10, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa Muuse Aadan Axmed, ayaa shaaca ka qaaday inuu iska casilay xilkii Guddoomiye-nimo ee uu ka hayey Jaamacaddaas, ka dib markii ay soo baxeen cabashooyin ka dhan ah maamulka Jaamacadda oo ay Ardaydu ka muujiyeen lacago lagu kordhiyey.
Guddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa oo ku taalla isla magaalada Hargeysa oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta Jaamacadda, waxa uu sheegay inuu isu casilay laba arrimood oo kala ah mid isaga shaqsi ahaan u gaar ah iyo arrimo la xidhiidha kacdoon ay Ardayda Fakallada kala duwan ee Jaamacadda wax ka bartaa ka sameeyeen lacago lagu kordhiyey lacagta laga qaado ee ay wax ku bartaan.
“Waxaan shalay istiqaaladii qoraal ah u dhiibay Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare aniga oo ah Guddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa, xilkaas oo aan hayey muddo shan bilood iyo toban maalmood ah. Waxaan xilkaa iskaga casilay asbaabo shaqsi ah oo aniga I quseeya,”ayuu yidhi Guddoomiyuhu
Prof Muuse Aadan wuxuu intaas ku daray “Jaamacadda oo maalmahan warkeedu ku jiray Warbaahinta in Fiiga Jaamacadda waxoogaa lagu kordhiyey, in markaas ay ardaydii jaamacaddu samaysay dhaqdhaqaaq, warbixinana laga soo saaray Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare iyo Wasaaradda arrimaha guduhu ay warbaahinta ka sii-daayeen iyada oo aan Maamulka Jaamacadda lagala tashan.”
“Iyaga Wasiirradu oo u arkaayey sidii ardaydu ugu warrantay ama ardayda oo ay kulmeen siday warbixinta ku siiyeen in arrintu meel khatara oo amniga dalka khalkhal gelin karta, isla markaana qas abuuri kara, Wasiirka Waxbarashaduna Guddi u saartay. Markaa, ka dib waxaan go’aansaday inaan iska casilo Xilkii Guddoomiyaha Jaamacadda ee aan hayey.” ayuu yiri Guddoomiyuhu
Istiqaaladda Guddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa ayaa ku soo beegantay wakhti Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Somaliland Samsam Cabdi Aadan Guddi Xaqiiqo-raadis ah oo soo baadha duruufaha keenay lacagaha Ardayda Jaamacadda lagu kordhiyey u saartay Jaamacadda Hargeysa Arbacadii hore. ka dib markii ay Ardayda Jaamacaddu warbaahinta ka sheegeen in Lacago aanay qaadi karin lagu kordhiyey qayb kasta oo ka mid ah qaybaha waxbarashada ee Jaamacadda Hargeysa.
Previous PostMasuuliyiinta Komishanka Xuquuqul Insaanka oo ka hadlay duruufo ay ku soo arkeen xabsiga Mandheera Next PostBadhasaabka Gobolka Maroodi-jeex oo kulan la yeeshay Iskuduweyaasha Gobolka